inguqulelo 0.9.9.0 – Abasebenzi zehlabathi – kumanyanisa!
UCanzibe 1, 2016 ngokuthi umnikelo 8 izimvo
Kuba wokuqala kaMeyi, ngosuku abasebenzi ngamazwe siye ekugqibeleni wakhulula uguqulelo kakhulu bekukudala kwaye alindele 0.9.9.0.
Ziziphi ezi ndaba zilungileyo uguqulelo?
Ekuqaleni – inkxaso Baidu, isigebenga search Chinese nayo kuba injini translation, kunye inkxaso ezinjengesiCantonese leyo kunokuba elilodwa le injini. Enye into entle kukuba le injini, ewebhu zibanjelwa eTshayina Ungafumana ukufikelela ukusebenza injini translation.
Isibini – siye fixed isitshixo ngaphantsi inkxaso sangoku bobabini Google kunye yandex, ngoko okunene kufuneka basebenze kwakhona ngoku. Ngoko ke, ukuba amaphepha ambalwa site bakho zaguqulelwa, inguqulelo entsha ukhuselekile. A iilwimi ezimbalwa kongezelelwa kwinkqubo.
Isithathu – ezininzi iinguqu, iyafakelelwa bug fixes ngeenxa zonke. yeah, kufuneka ukulungisa amaxwebhu FAQ abanye.
Yini na ukuba nangoku ufunda le? uphuculo nje namhlanje, kunye nomsebenzi ingomso!
kwemi- Barcelona uthi
UCanzibe 11, 2016 ngexesha 4:09 pm
Ogqibeleleyo enkosi kakhulu! estábamos esperando esta nueva versión con impaciencia 🙂
UCanzibe 13, 2016 ngexesha 1:50 pm
Kakhulu! sele zaphuculwa.
Enkosi ngomsebenzi wenu onzima.
UCanzibe 21, 2016 ngexesha 7:24 mna
Ibonakala intle. Enkosi.
umbuzo Quick: iseva wam Opcache efakiweyo, esebenzayo kunye nokusebenza. Ngaba ukhupho lwexesha elizayo OS Transposh inkxaso Opcache?
UCanzibe 24, 2016 ngexesha 5:58 pm
Opcache asiyo efihlakeleyo umsebenzisi, kodwa nawuphi na umsebenzisi script efihlakeleyo ukuba uyazi ukuba (APC, APCl +, xCache) baxhaswe.
EyeThupha 19, 2016 ngexesha 9:28 pm
Ndiyayazi le iplagi ukusukela ~ 2010 kodwa ekuqaleni ndaya for WPML njengoko ndandicinga ukuba ngaphezulu… (hayi kwi league efanayo Transposh, WPML ayikho oluzenzekelayo)
Ayikaze ndiyaphazama kakhulu… maxa wambi WPML waba bugs ezibalulekileyo (Ndandisebenzisa phezu kwisayithi kunye ngaphezu 20.000 utyelela ngosuku) yaye kanye WordPress yahlaziywa ngendlela entsha, i bug lokungaziwayo abagcina site offline wam fixed yi WPML malunga 10 iintsuku… Ndandingakwazi imali ixesha elide elinde, njengoko sam sesiphoso ubukhulu becala organic ne Google kunobuzaza kakhulu malunga esiphansi…
Transposh nto ngaphandle kwamathandabuzo the best translation plugin, nangona its not ogqibeleleyo, oko emihle zigcinwe kakuhle.
EyeThupha 26, 2016 ngexesha 1:06 pm
Enye iplagi best Translation simahla kwaye ngokoluvo lwam lowo best.
Kukho kungaba ezinye ngcono translation umzekelo slug kwaye eminye imiba enxulumene imitya wokuguqulela ayikwazanga ukulungiseka.
Le nguqulelo plugin yam endiyithandayo.
EyeThupha 26, 2016 ngexesha 9:45 pm
Havent siwusebenzisa kodwa, kodwa ukuba luphawula Baidu liyoyikeka. Andiqinisekanga indlela umgangatho wokuguqulela Baidu xa kufaniswa ku Google.
Ngoko nice ezisebenzisela kuphela Baidu for Chinese, kunye neentonga ne Google yonke enye.
EyeNkanga 7, 2016 ngexesha 12:16 pm